Tonga soa eto Soamahatony | Chambre d'hôtes à Antananarivo - Soamahatony
Tonga soa eto Soamahatony
Submitted by admin on Fri, 12/03/2010 - 14:38
Tsy lavitra ny seranam-piaramanidina Ivato no misy an’i SOAMAHATONY. Araka izany anarany izany dia toerana ambanivohitra mampilamin-tsaina ary mahatony, ety am-patran’i Madagasikara, no andraisan’i Daniel (Frantsay) sy i Sahondra (Malagasy) anao, na hisakafo izany na hatory eo an-toerana. Tsy lavitra an’Antananarivo no misy azy, ary maro ny fomba hihazoana ny renivohitra ao anaty antsasakadiny monja.
Na lian-javaboahary ianao, na mpizaha tany manaja tontolo iainana sy mikatsaka ny tombon-tsoan’ny mponina eo an-toerana, dia hahita endrika fandraisam-bahiny hafa noho ny hôtely mahazatra : tany mirefy roa hekitara no iorenan’ireo trano anankiroa misy efitra dimy mampiadana sy mahafatra-po ampiantranoan’izy mivady ny mpitsidika. Ao ny trano lehibe izay sady fonenan’i Daniel sy Sahondra no misy ireo efitra nomaniny ho an’ny mpivahiny, ary etsy akaikiny kosa ny "Villa Oliver".
Azo itsangatsanganana sy ialam-boly ny tanànan’izy mivady, izay voavoly karazan-kazo sy zava-maniry mitohatohatra, mifanentana amin’ny toerana sady manaja ny tantaran’io vohitra nisy mponina fahagola io. Azo atao koa ny mizaha ireo vohitr’Imerina manodidina. Miara-miasa amin’izy ireo i Daniel sy i Sahondra hitari-dalana ny mpivahiny hitsidika ireo toerana manan-tantara manokana eo anivon’ny fanjakana merina fahizay. Ny fifampikasohana amin’ny tambanivohitra eny no iorenan’ny fizahan-tany mitohy sy maharitra satria ahazoanao mahita ny fiainany andavanandro sy ny lova sarobidy napetraky ny razana.